Isikhumba sobuso sibhekene nazo zonke izinhlobo zokucindezeleka, ngakho isimo sesikhumba sethu singase sihluke. Isikhumba singaba somile noma siphuzile, siphelile noma singenasici. Ngokusekelwe kulokhu, sizokhetha izitshalo zamaski.
Cabanga ngokuhluka kwe-mask esikhumbeni esomile: umuthi onomphumela we-astringent noma wokunciphisa - izimbali ze-lime, i-chamomile, amaqabunga e-mint noma ama-rose petals.
Ngesikhumba se-oily, isiski semifino ebusweni, ehlanganisa amakhambi anjalo, owomisa isikhumba futhi abe nomphumela wokulwa nokuvuvukala: i-horsetail field, i-sage, i-wort yase-St. John, i-yarrow, umama nomama, i-marigold marigolds.
Uma udinga ukuvuselela isikhumba sabantu futhi, ngesikhathi esifushane kunokwenzeka ukuphelisa ukucabangela nokucasula, kufanele uthathe amaqabunga e-birch, izimbali ze-hops noma i-aloe.
Into eyodwa okumelwe uyikhumbule ukuthi utshani obuhlukanisiwe obuqhekekile uma uqhathaniswa nokhula oluqinile lunikeza umphumela ophelele kakhulu. Ekhaya, kungenzeka ukuba ugaye ku-mortar noma ikhofi grinder, kubuye kube lula ku-blender. Faka isicelo se-mask kuphela emva kokuhlanzwa okuhle kwesikhumba, ukuze ukukhishwa kwesikhumba kungaphazamise ukungena kwezakhiwo ezizuzisayo zobuso be-mask.
Iresiphi yokupheka emasks kusuka kwamakhambi.
Izipuni ezimbili zamagilebhisi athululelwa ngamanzi ashisayo futhi zivuselela kuze kuvele i-gruel ekhanda. Sibeka emlilweni bese siletha emathumba, kodwa ungabilisi. Shiya imizuzu embalwa ukupholisa. Uma imaski yethu ifana nokushisa komzimba, ungayifaka ngokuphepha ebusweni bakho. Futhi, ungakhohlwa ukuthi sihlanza ubuso ngaphambi kwesikhathi. Ubuso obunomaski bungagcinwa nge-gauze, futhi ngamehlo ukubeka ukotini swabs, okufakwe emanzini afudumele noma obuthakathaka itiye. Manje ungakwazi ukuphumula imizuzu engu-20, uphuphe futhi ucabange ngokuhle. Uma i-mask ishaya ngokushesha, ungasebenzisa isibani esibhakabhaka, i-bulb evamile ifanelana, uyibeke ebangeni lika-30 cm.
Izipuni ezimbili noma ezintathu zamagilebhisi (ungaxuba amakhambi ambalwa) uthele amanzi abandayo, mayelana nezibuko ezimbili. Sibeka emlilweni, siletha emathunjini futhi siphumelele ekushiseni okuphansi emizuzwini emihlanu. Hlunga umhluzi, bese ulinda kuze kufike izinga lokushisa lokushisa komzimba. Ngalesi sikhathi silungiselela ama-napkins we-gauze walesi sikhulu, ukuze kube lula ukubeka ubuso. Geza ama-napkins emfuleni bese ugqoka imbobo, ebunzini nasemathunjini. Ngemizuzu engu-10 ungalala phansi uphinde uphumule. Ngokushesha nje lapho ama-napkins epholile phansi, phinda inqubo, imanzi futhi isakaze ebusweni, senza kanjalo izikhathi ezintathu kuya kwezine. Emva kokugeza ubuso bakho ngamanzi afudumele. Uma uye wandisa ama-pores, ungawageza ngamanzi abandayo.
Mask ngokumelene nama-acne.
I-Calendula ibhekana ngokugcwele nokulwa nama-acne. Kufanele usebenzise i-tincture ye-calendula.
Sidinga i-koqweqwe lwawo noma ingilazi yeglasi, ukolweni noma i-oatmeal. Enye isipuni se-tincture ye-calendula yengezwa engilazi yamanzi afudumele futhi ithululelwe esitsheni. Engeza ufulawa futhi uhlanganise ngokuzikhandla ngokuvumelana okuhambisanayo.
I-mask ephumela ngokugcwele igcwele ubuso. Sibamba imizuzu engama-30 futhi sihlanza ngamanzi afudumele, kungabanda, kuzosusa amaphuzu.
Qaphela: Amaski emvelo avela emifino ebusweni angenziwa kabili noma kathathu ngesonto. Inkambo egcwele imaski angu-20, bese ikhefu ezinyangeni ezimbili futhi ungaphinda uphinde ufunde. Kubaluleke kakhulu ukucacisa ama-herbs angcono kuwe. Odokotela-i-allergen ne-cosmetologist bayokusiza ngokukhetha.
Ukwandiswa kwe-uric acid egazini
Ukwelashwa kwe-gout nezitshalo zokwelapha
Iseluleko esiwusizo nesilulekile ekuguleni kwegazi
Ukuqedwa kokulahlwa kwamabesifazane
I-Chiromancy: sinquma ingcebo yesikhathi esizayo ngemigqa esandleni
Ubuhlobo obuhle emndenini. Ifomu lokuziphatha
Isaladi nge-rice noodle
Izimpawu nemilingo kulabo abahamba emgwaqeni
Yini okufanele ugqoke ijaji elifushane?
Umphumela wokukhipha isisu kubalingani
I-Fusilli ene-green sauce yemifino